केपी ओली बोलेका कुरामा अडिग छन्, दुईजिब्रे कुरा गर्दैनन् : डा. दीक्षित (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ८ मंसिर । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नै नभएको दाबी गरे । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले अहिले एमालेमा ओलीको विकल्प नै नभएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन ? ओली पनि हाँसेर बसेका छन् होला ।’ उनले एमालेको राजनीतिक भविष्य धेरै राम्रो रहेको सुनाए । उनले ओलीलाई आफूहरुले बालुवाटारबाट निकालेको सुनाए । तर, आज पनि नेपालको राजनीतिक केपी ओलीको वरिपरि घुमिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केपी ओलीको बोलीमा ठेगान छ । पार्टी एकढिक्का राखेका छन् । यो त ठूलो कुरा हो ।’